छानबिन समिति निष्क्रिय हुँदा अझै निस्किएन निष्कर्ष, फेरि विराटनगर बन्द गर्ने पीडित परिवारको चेतावनी ! - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
भीम कामत मृत्यु प्रकरण
छानबिन समिति निष्क्रिय हुँदा अझै निस्किएन निष्कर्ष, फेरि विराटनगर बन्द गर्ने पीडित परिवारको चेतावनी !
बुधवार, कात्तिक १० २०७८
मोरङको विराटनगर महानगरपालिका–११ जनपथ मार्गका ३९ वर्षीय भीम कामतको मृत्यु प्रकरण अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन । विराटनगरमा ठुल्ठुला विरोध प्रदर्शन भएसँगै दबाबमा परेको प्रशासनले छानबिन समिति गठन गरेपनि समिति नै निष्क्रिय रहँदा कामत मृत्यु प्रकरणले टुङ्गो पाउन सकेको छैन ।
गाँजासहित पक्राउ परेका भीमको गत भदौ २० गते आइतबार दिउँसो साढे १ बजे हिरासतमै मृत्यु भएको थियो । भदौ १८ गते शुक्रवार प्रहरीले भीमको घरमा खानतलासी गर्दा तीन किलो चार सय ८० ग्राम गाँजा फेला परेको थियो । त्यसपछि पक्राउ परेका भीमको हिरासतमा चरम यातनाबाट मृत्यु भएको मृतकका दाजु शम्भु कामत बताउँछन् ।
भाइको मृत्यु भएको ५२ दिनसम्म पनि छानबिन समितिले हात बाँधिदिँदा आफूहरूले न्याय पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘खै आज उसको मृत्यु भएको ५२ दिन भइसक्यो । हामी गरिब–दुःखीका लागि न्याय पनि महँगो साबित भइसकेको छ । अहिलेसम्म उसको मृत्यु रहस्यमै सीमित छ । सम्भवतः छानबिन समितिले बिर्सियो होला, तर हामी मान्छे भेला पार्दै छौँ । फेरि विराटनगर बन्द गर्नेछौँ ।’
प्रहरी हिरासतमै ज्यान गुमाएका मोरङको विराटनगर महानगरपालिका–११ जनपथ मार्गका ३९ वर्षीय भीम कामत ।
छानबिन समिति निष्क्रिय छैन : संयोजक पोखरेल
भीमको मृत्युपछि चौतर्फी विरोध प्रदर्शन भएपछि भदौ २१ गते सोमबार नै उक्त प्रकरणको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको सर्वपक्षीय भेलाले सहायक जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलको नेतृत्वमा गठित समितिमा प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी नवीन राई, विराटनगर ११ र १२ का वडाध्यक्ष र कामतको घर नजिकका छिमेकी थिए ।
सो समिति पटक–पटक छलफल गरे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । भिसेरा रिपोर्टका कारण निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको सहायक जिल्ला अधिकारी पोखरेल बताउँछन् । गत असोज १७ गते केटिएम दैनिकले रिपोर्टका बारेमा सोध्दा उनले ‘आज आउने’ भनेर किटान गरेका थिए । त्यसको करिब एक महिनापछि कात्तिक १० गते केटिएम दैनिकले सोही प्रश्न दोहोर्‍याउँदा उनले उत्तरमा ‘आज बेलुकासम्म आइपुग्ने’ बताए ।
यसै गरी, संयोजक पोखरेलले आफू छानबिनमा सक्रिय रहेको जनाउँदै भने, ‘रिपोर्टले पनि अड्किएको छ । मैले आफ्नो ठाउँबाट काम गरिरहेको छु । तर समितिका अरू सदस्यहरू निष्क्रिय बनिदिनुभयो । बोलाएका बेला आउनु हुन्न । कहिले को नआउने कहिले को । यसैले पनि ढिलाइ भइरहेको छ । अब आज रिपोर्ट आउँछ अनि भोलि सबैलाई डाक्छु ।’ सम्भवतः आगामी सातासम्ममा रिपोर्ट सार्वजनिक हुन्छ ।’
रामरूप कामत र चुलिया कामतका साहिँला छोरा भीम वैदेशिक रोजगारका क्रममा मलेसिया बसेर २०७६ सालमा नेपाल फर्किएका थिए । आठ वर्ष मलेसिया बसेका उनी नेपाल फर्किएपछि कोभिडका कारण देशमा लकडाउन सुरु भयो । लकडाउनयता उनले जनपथ मार्गमै होटेल सञ्चालन गर्न थालेका थिए । होटेल राम्रै चलेको थियो । होटेल गर्दा श्रीमतीसहित परिवारकै सहयोग पाइरहेका थिए ।
लकडाउनकै समयमा उनको मित्रता राजन खड्का नामक एक व्यक्तिसँग भयो । राजन बस लाइनमा काम गर्थे । लकडाउनका कारण यातायात ठप्प हुँदा राजनले भीमलाई चिया पसलमा थुप्रै काममा सहयोग गर्थे । भीमलाई सहयोग गरेर रिझाउन सफल राजने उनीसँग सफारी किनिदिन आग्रह गरे ।
राजनको आग्रह स्विकार्दै भीमले उनलाई सिटी रिक्सा किनिदिएका थिए । सिटी रिक्सा चलाउन थालेपछि पनि राजनले थुप्रै लफडाहरू गरे कहिले मापसे गरेर मान्छेलाई ठक्कर दिने त कहिले ट्राफिकबाट समातिने । यी सबै झमेला भीमले हेर्थे र उनलाई यसो नगर्न सम्झाउँथे । झमेला धेरै नै आइपर्न थालेपछि भीमले चेतावनी स्वरूप राजनको सिटी खोसे । पछि पुनः राजनले अबदेखि यसो गर्दिनँ भन्दै सिटी सफारी दिन आग्रह गरेपछि भीमले रिक्सा दिए । तर फेरि उनीहरूबिच पहिलाको जस्तै सम्बन्ध रहन सकेन ।
प्रहरीले नै थुनुवाको हत्या गरेको भन्दै भदौ २२ गते विराटनगरमा कामतका आफन्तहरूले गरेको प्रदर्शन । फाइल तस्विर केटिएम दैनिक
१८ गते शुक्रवार भीमको घरमा एक्कासि प्रहरीको टोली पुग्यो । प्रहरी टोलीले उनको घर खानतलासी गर्दा तीन किलो ४८० ग्राम गाँजा फेला परेको थियो । प्रहरीलाई गाँजा देखाउँदै सहयोग गर्नेमा थिए राजन । ‘हामी पनि घरमा गाँजा लुकाएर राखेको देखेर छक्क परेका थियौँ’, भीमका दाइ शम्भु भन्छन्, ‘पहिले कहिले पनि यस्तो थाहा थिएन । प्रहरीले गाँजा निकाल्दा पनि मैले मेरो भाइलाई गाली गरेँ ।’ भीमको साथी राजनले प्रहरीलाई यहाँ–त्यहाँ भन्दै गाँजा देखाउँदै गर्दा उनको भूमिका आशङ्काजनक रहेको बताउँदै शम्भुले आफ्नो भाइलाई फसाएको हुनसक्ने आशङ्कासमेत गरे ।
प्रहरीको दानवीय ब्यहारबाट हिरासतमै थुनुवाको मृत्यु, अस्पतालमा मरेको रिपोर्ट बनाउन प्रहरीको दबाब
मोरङको विराटनगर महानगरपालिका–११ जनपथ मार्गका ३९ वर्षीय भीम कामतको मृत्यु प्रहरीकै दानवीय ब्यवहारबाट भएको आफन्तले आरोप लगाएका...
आइतबार, असोज १७ २०७८
यस्तै, त्यसयता राजनलाई आफूले नदेखेको र प्रहरीलाई जानकारी गराउँदासमेत त्यसतर्फ प्रहरीको ध्यान नगएको उनको आरोप छ । गाँजासहित प्रहरीले भीमलाई मात्र समात्यो र प्रहरी हिरासतमा राख्यो । भीममाथि प्रहरीले म्याद थप गरेको थिएन । म्याद थप गर्नुअघि नै उनको भदौ २० गते आइतबार दिउँसो साढे १ बजे प्रहरी हिरासतमै मृत्यु भयो । पक्राउ परेको दुई दिनमै हिरासतमा मृत्यु भएपछि तीन दिनसम्म आफन्त र स्थानीयले प्रहरीको चरम यातनाबाट मृत्यु भएको दाबी गर्दै विद्रोह गरे । मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि विराटनगरका ठाउँ–ठाउँमा टायर बालेर घटनाको सत्य तथ्य अनुसन्धान गर्न दबाब सिर्जना गरे । दबाबको पनि करिब एक महिना पुग्न लागेको छ । तर मृतकका परिवारले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
रहस्यमय मृत्यु, प्रहरीको भूमिका शङ्कास्पद
भदौ २० गते आइतबार दिउँसो साढे १ बजेतिर पुनः प्रहरी भीमको घरमा पुग्यो । भीम बिरामी भएको जनाउँदै प्रहरीले आइसियुमा राख्नुपर्ने भएकाले तुरुन्त कोसी अस्पताल जान सुझाव दिए । खाना खाने सुरसारमा रहेको कामत परिवार अत्तालिएर अस्पताल पुगे । तर त्यहाँ पुग्दा भीमको मृत्यु भइसकेको थाहा पाए । ‘उहाँको मृत्यु भएको सुन्दा पत्याउनै सकिनँ’, भीमकी श्रीमती यशोदा भन्छिन्, ‘शनिवार दिउँसो ३ बजेतिर मैले स्वस्थ अवस्थाका श्रीमानलाई भेटेर आएकी थिएँ । मासु–भात खान दिएर एक हजार रुपैयाँसमेत दिएर आएकी थिएँ । भोलिपल्ट नै प्रहरीले बिरामी भएका कारण मर्‍यो भन्दा कसरी पत्याऊँ ?’
भीमका दाइ शम्भुले अघिल्लो दिन नै भाइलाई चरम यातना दिई मृत्युको मुखमा पुर्‍याएको आशङ्का गरे । ‘प्रहरीले बिरामी भएर मरेको भन्दै समय जानकारी दिँदा पत्याउन सकिनँ । किनकि उसको शरीर कडा भइसकेको थियो । अनि शरीरैभरि चोट छ ।’ हतकडीले गर्दा चोट लागेको हो भन्दै प्रहरी पन्छिन खोजेको जनाउँदै उनले प्रश्न गरे, ‘बिरामी मान्छेको शरीरभरि खतैखत कसरी हुन्छन् । फेरि बिरामी भएको अवस्थामा आफन्तलाई जानकारी गराइएन । अनि टाउको, कुम र कोखामा पनि हतकडी लगाइन्छ ? त्यहाँ त अझ ठुल्ठुला चोट छन् !’
यस्तै उनले भीमलाई झुण्ड्याएर चरम यातना दिइएको हुन सक्ने बताउँदै भने, ‘भीमले लगाएको कपडा पिसाबले भिजेको थियो । कम्मरदेखि माथि चिसो थियो । प्रहरीले कहिले अस्पतालमा मरेको र कहिले अस्पताल ल्याउँदा ल्याउँदै मरेको भनिरहँदा नै प्रस्ट हुन्छ कि घटना शङ्कास्पद छ ।’
यता, प्रहरीले भने आइतबार बिहान एक्कासि बिरामी परेका कारण कोसी अस्पताल ल्याएको र त्यहाँ नै उनको मृत्यु भएको दाबी गरेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी प्रमुख एसपी जर्नादन जिसीले कामतलाई म्याद थपका लागि अदालत लाने क्रममा कामेको तथा मुखबाट फिँजसमेत आएपछि उपचारका लागि कोसी अस्पताल लगिएकोमा त्यहीँ उनको मृत्यु भएको ठोकुवा गरेका थिए ।
तर अस्पताल प्रशासन भने यो मान्न तयार छैन । कोसी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर चुमनलाल दास प्रहरीले अस्पताल ल्याउनुअघि नै भीमको मृत्यु भइसकेको जनाउँछन् । ‘भीमको मृत्यु पहिले नै भइसकेको देखिन्छ’, उनले भने, ‘यो दिन नै मरेको भन्ने यकिन जानकारी भएन । तर मृत शरीर प्रहरीले अस्पताल ल्याएको थियो । पोस्टमार्टमपछि लगिएको हो ।’
प्रहरीको दानवीय व्यवहारले हिरासतमै मृत्यु
सँगै हिरासतमा रहेका दुई युवाको बयानअनुसार प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा हालेकै दिन उनी बिरामी परेका थिए । ‘सोही दिन बेलुका करिब ७ बजेको समयमा उनको मुखबाट फिँज आएको थियो,’ नाम नखुलाउने सर्तमा थुनामुक्त भइसकेका एक जनाले भने, ‘मुखबाट फिँज आएपछि उनलाई प्रहरीले जुत्ता नाकमा हालेर उठाएका थिए ।’
प्रहरीले नै थुनुवाको हत्या गरेको भन्दै विराटनगरमा प्रदर्शन
हिरासतमा रहेका थुनुवाको मृत्यु भएपछि विराटनगरमा मङ्गलबार पनि प्रदर्शन भएको छ । गाँजासहित पक्राउ परेका विराटनगर महानगरपालिका–११...
मङ्गलवार, भदौ २२ २०७८
यस्तै, प्रहरी स्रोतका अनुसार आइतबार बिहान उनी बिरामीजस्तो गरेपछि प्रहरीले हिरासत कक्षबाट बाहिर निकाली हात र खुट्टामा जोडले हतकडी लगाएका थिए । ‘हिरासत अधिकृतको निर्देशनमा उनलाई हात र खुट्टामा ठुलै अपराधीजस्तो हतकडी लगाइयो,’ एक प्रहरीले नाम नखोल्ने सर्तमा भने, ‘हुन त मानवता नभएको ठाउँ हो हिरासत कक्ष । हिरासत कक्षभित्र आशंकितलाई समेत प्रमाणित अपराधीजस्तो व्यवहार गरिन्छ ।’
हतकडी लगाएर राखिएका कामतले मलाई गाह्रो भयो हतकडी खोल्दिनुस् भनेर हजारौँ पटक आग्रह गरेका थिए । तर उनको कुरा कसैले नसुनेपछि उनले हतकडी खोल्न हातखुट्टा चलाउन थालेका थिए । उनले हतकडी खोल्न धेरै अनुरोध गरेपछि प्रहरीले उनलाई हिरासत कक्षबाहिरको एक कुनामा राखिदिएका थिए । अनेकन् प्रयासपछि पनि हतकडी खुल्न नसकेपछि उनले तड्पिँदै त्यहाँ नै ज्यान गुमाएका हुन् । मृत्यु भएको केही समयपछि प्रहरीले नाटकीय शैलीमा अस्पताल पुर्‍याएको थियो ।
सिसी टिभी फुटेजमा के छ ?
भीमको मृत्युमा आशङ्का व्यक्त गरेर प्रदर्शनमा उत्रिएका उनका आफन्तहरूले पटक–पटक सिसी टिभी फुटेज हेर्न माग राखेपछि प्रहरी फुटेज देखाउन बाध्य भएको थियो । सिसी टिभी फुटेज हेर्न मृतकका दाजु शम्भुका साथै उनका केही आफन्त पुगेका थिए ।
उनीहरूले फुटेजमा भीमलाई हिरासतभित्र राखिँदै गरेको र सकुशलै निकाल्दै गरेको मात्र देख्न पाए । ‘भीमलाई सकुशल नै निकालिएको देखियो’, शम्भु भन्छन्, ‘तर फुटेज नै इडिट गरिएको जस्तो । केही प्रस्ट नदेखिने । थोरै मात्र देखेँ । भीम सकुशल बाहिर निस्किँदै गरेको । तर उनको शरीरमा लागेको चोट कसरी आयो ? अनि त्यति सकुशल मान्छे कसरी म¥यो ? ’
अस्पतालमा मृत्यु भएको रिपोर्ट बनाउन डाक्टरलाई दबाब
भीम कामतको मृत्युपछि आफन्त र स्थानीयले विरोध प्रदर्शन गर्न थालेपछि प्रहरीलाई दबाब थपिएको थियो । आफ्नो दबाब कम गर्न प्रहरीले कोसी अस्पतालका डाक्टरहरूलाई भीमको मृत्यु अस्पतालमै भएको रिपोर्ट बनाउन दबाब दिएका थिए । प्रहरीले डाक्टर कौसल सिग्देललाई अस्पतालमै मृत्यु भएको रिपोर्ट बनाउन दबाब दिएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ ।
‘बाहिर विरोध सुरु भएपछि प्रहरीले डा. सिग्देललाई अस्पतालमै मरेको रिपोर्टमा साइन गर्न दबाब दिएको थियो,’ अस्पताल स्रोतले भन्यो, ‘तर डाक्टर तयार भएनन् । उनले ठाडै अस्वीकार गरेपछि प्रहरीका एसपी, डिएसपीसहितको टिमले उनलाई दबाब दिन थालेका थिए । तर पनि उनी पछि हटेनन् ।’
यसरी दबाब दिनेमा वडा प्रहरीका डिएसपी दीपक कार्की, मोरङ प्रहरी प्रमुख जनार्दन जिसी र प्रवक्ता डिएसपी दीपक श्रेष्ठ रहेको अस्पताल स्रोत बताउँछ । तथापि, मोरङ प्रहरी प्रमुख जिसीले आफूले दबाब नदिएको जनाउँदै छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा दोषी देखिएमा आफू कारबाही भोग्न तयार रहेको सुनाए । यस्तै, वडा प्रहरीका डिएसपी कार्कीले पनि आफूले कुनै पनि डाक्टरलाई दबाब दिएको जनाए ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: बुधवार, कात्तिक १० २०७८ १७:०९:३४
बेलबारी जङ्गलभित्र सडेगलेको शव भेटियो, प्रहरीलाई पहिचान गर्न सास्ती